नगद र गहना लिएर श्रीमती छिमेकीसँग भागेपछि… « purwanchal National Daily
नगद र गहना लिएर श्रीमती छिमेकीसँग भागेपछि…
झापा, जेठ ११। तपाई विवाहित पुरुष हुनुहुन्छ ? वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि यसो हो भने बेलैदेखि श्रीमतीमाथि निगरानी बढाउनुहोला ! त्यसो गर्नु भएन भने श्रीमतीले धोका दिन सक्छिन् र तपार्ईले जीवनभर पछुताउनुपर्नेछ ।
यस्तै अवस्थाका कारण पीडित बनेका छन्, झापा भद्रपुर नगरपालिका–२ निवासी सुमन कटुवाल । कटुवालकी श्रीमती ६ बर्षीय छोरा रुपकलाई लिएर अहिले बेपत्ता भएकी छिन् । वैदेशिक रोजगारीबाट दिनरात श्रम गरेर कमाएर पठाएको धन सम्पत्ति लिएर श्रीमती विनीता कटुवाल (रेग्मी) र छोरा बेपत्ता भएपछि कटुवाल अहिले प्रहरी समक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् । लाखांै नगद र गरगहना लिए २७ बर्षीया श्रीमती छिमेकी राम लिम्बूसँग भागेको श्रीमान् कटुवालको आरोप छ ।
घटना विवरण अनुसार २१ महिना अघि वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरब गएका सुमनलाई गत २०७४ साल फागुन २३ गते श्रीमती विनीता हराएको जानकारी छिमेकीले दिएका थिए । श्रीमती हराएको तीन दिनपछि बिर्तामोडस्थित आफन्तको घरबाट श्रीमती फेला पारेर सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीनगरको रोहवरमा फागुन २६ गते माइती पक्षका विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई जिम्मा लगाइएको सुमनले बताए । विदेशबाट नफर्किञ्जेलसम्म श्रीमतीलाई निगरानीमा राख्न माइती पक्षलाई जिम्मा लगाएको र श्रीमतीलाई ठूलीआमा तुलमाया श्रेष्ठले घरमा राखेको उनले बताए । आफू गत चैत ३ गते साउदीबाट घर आएको र घर आएकै दिन श्रीमती छोरा लिएर छिमेकी लिम्बूसँग भागेको उनले बताए ।
साना किसान सहकारीमा सासूआमा याममाया काफ्ले कटुवालको नाममा रहेको खाताबाट श्रीमतीले सहीछाप मिलाएर एक लाख ७० हजार रुपैयाँ, सोही सहकारीमा छोरा रुपकको खाताबाट ८२ हजार रुपैयाँ, विदेशबाट पठाएको ९ लाख रुपैयाँमध्ये खर्च गरेर बाँकी रहेको दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ र सात तोला सुन लिएर श्रीमती लिम्बूसँग भागेको उनले दाबी गरेका छन् । उनले गत चैत १३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा श्रीमती विनीताको हुलियासहितको फोटो र घटना विवरणसहित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै जाहेरी दिएको बताए ।
उक्त जाहेरीको बोधार्थ वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुर, सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीनगर, माइती नेपाल काँकरभिट्टालाई समेत दिएको उनले जानकारी दिए । छिमेकी लिम्बूको आफन्त ताप्लेजुङ जिल्लामा बसोबास गर्दै आएको र उनीहरु पनि उतै गएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । उनले भने– ‘मलाई मेरो छोरो र सम्पत्ति भए पुग्छ । श्रीमती र छिमेकी लिम्बूलाई केही गर्दिनँ, उनीहरु आफूखुशी बसुन् ।’
२१ महिनाको वैदेशिक रोजगारीपछि घर फर्किंदा घरमा न श्रीमती न त छोरो कसैलाई भेट्न नपाएको उनले बताए । ‘श्रीमतीलाई बूढा बाबुआमालाई रेखदेखको जिम्मेवारी दिएर आफू विदेश जाँदा घरपरिवारमा यस्तो बज्रपात हुन्छ भन्ने मैले कल्पना समेत गरेको थिइँन्’– उनले भने– ‘नौ वर्षअघि आगो साक्षी राखेर जीवनभरसँगै बाँच्ने सँगै मर्ने वाचा गरेर विवाह बन्धनमा बाँधिएका थियौंँ, तर उनले मलाई एक्लो पारेर अर्कैसँग गइन्’– उनले भने ।